घर यूरोपियन फुटबल स्टोरीहरू पोर्तुगाली फुटबल खेलाडीहरू डेनियल पोडेंस बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्यहरू
डेनियल पोडेंसको जीवनीले तपाईंलाई उसको बचपन कहानी, प्रारम्भिक जीवन, अभिभावक, पारिवारिक तथ्य, प्रेमिका / पत्नी हुनु, नेट वर्थ, जीवनशैली (कार), र व्यक्तिगत जीवनको बारेमा तथ्यहरू बताउँछ।
संक्षिप्तमा, हामी तपाईंलाई पुर्तगाली फुटबलरको एक पूर्ण जीवन कहानी प्रस्तुत गर्दछौं, शुरुआती दिनदेखि, जबसम्म उनी प्रसिद्ध भए। तपाइँको भोक जगाउनको लागि, यहाँ प्रारम्भिक वर्षहरूको सारांश महान बृद्धि हो - यसले उसको जीवन कहानी बताउँदछ।
हो, डानियल पोडेंस एक घट्दो प्लेमेकर हो - एक मध्ये एक उत्तम स्पीड ड्राईभर पोर्तुगाली फुटबल खेलाडीहरू (२०२०) गोल-स्कोरिंग अवसर सिर्जना गर्ने उसको क्षमता प्रशंसकहरूले उनीबारे कुरा गर्दै आएका छन्। यद्यपि फुटबल प्रेमीहरूलाई उनको बायोको बारेमा थोरै थाहा छ जुन हामी एक क्षणमा अनावरण गर्नेछौं। धेरै विज्ञापन बिना, हामी उनको जवानीको कथाबाट सुरु गरौं।
डेनियल पोडन्स बचपन कहानी:
जीवनी सुरु गर्नेहरूको लागि, उहाँ पूर्ण नामहरू राख्नुहुन्छ डानियल कास्टेलो पोडेंस। पोर्तुगाली फुटबलर अक्टोबर १ 21 1995। को २१ औं दिनमा उनका बुबा क्विन्टिनो पोडन्स र आमा, मारिया डो सेउ कास्टेलोको पुर्तगालको नगरपालिकामा जन्म भएको थियो।
सानो बच्चाको रूपमा, ड्यानी एकदम नाजुक र संवेदनशील थियो। प्रारम्भमा, उहाँ पेशेवर फुटबल खेल्ने कल्पनामा डुबिरहनुभयो र उनको महत्वाकांक्षा कहिल्यै पार गर्ने कल्पना नै भएन।
त्यसपश्चात उनको आफ्नै शहर ओइरासमा, जवान ड्यानी आफ्ना साथीहरूसँग सडकको वरिपरि जुलुस गर्ने गर्थे, जसले फुटबलमा उनीहरूको सीपको परीक्षण गर्न मोड लिन्छन्। आफ्नो छोराको भविष्य उज्ज्वल हुन्छ भन्ने कुराको उत्कट चाहनामा, उसको बुवा (क्विन्टिनो पोडेंस) ले आफ्ना बालबालिकाको फुटबल सम्भाव्यतालाई राम्रो प्रयोगमा ल्याउन मद्दत गर्ने उपाय खोजे।
डेनियल पोडेंस परिवार पृष्ठभूमि:
स्पष्टतया, उहाँ एक त्यस्तो खोटमा हुर्केका थिए जसले तिनीहरूको सबै आधारभूत आवश्यकताहरू पूरा गर्न सक्दछन्। उनको जन्मस्थल (ओइरस) को फस्टाइरहेको आर्थिक अवस्थालाई धन्यवाद, पोडेंस परिवार एक मध्यमवर्गीय परिवारको रूपमा बाँचिरहेको थियो।
हाम्रो अनुसन्धानले देखाउँदछ कि एक गरीब पुर्तगाली परिवारले औसत वंशमा पुग्न १२ 125 वर्ष (पाँच पुस्ता) लिन सक्दछ। तर त्यो डेनियल पोडेंसको लागि होइन, जसका आमा बुबाले औसत मापदण्ड पूरा गरेका थिए।
डेनियल पोडेंस परिवार मूल:
यो पोर्तुगालमा प्रचलन भएको छ, प्रशस्त वेगको दुई थर हुन्छ जुन त्यसले आफ्नो मातृत्व र मातृ जडलाई झल्काउँछ। सबैभन्दा पहिले, उनी आफ्नो बुवाको अन्तिम नाम (पोडेंस) उनको महान-महान हजुरबुबाप्रति owणी छन्, जसको नाम मासेडो डे काभलिरोसको पोडेंस गाउँको पछि भएको थियो। अर्कोतर्फ, उनको उपनाम (क्यास्टेलो) उनको आमाको रक्त रेखाबाट उत्पन्न हुन्छ।
के तपाईंलाई थाहा छ? ... पोडन्स जन्मस्थान (ओइरास) पोर्तुगल र युरोपको सबैभन्दा विकसित नगरपालिकाहरू मध्ये एक हो। लिस्बनमा सबैभन्दा कम बेरोजगारीको रूपमा परिचित भएको कारण, ओइरास ती मानिसहरू हुन् जसले यसका सुन्दर तटहरू भ्रमण गर्न मन पराउँछन्।
डेनियल पोडेंसको अनटोल्ड क्यारियर कहानी:
पहिले नै भनिएझैं पोर्तुगाज विger्गरले सधैं फुटबलको लागि सानो बच्चाको रूपमा देखायो। केवल छ वर्षको कोमल उमेरमा, भविष्य भोल्फ्स म्यानले फूटबल प्रशिक्षणको लागि समर्पित समय तालिका बनाइसकेका थिए। यस समयमा भविष्यलाई देखेर आफूलाई युवा क्लबको साथ सेटअप गर्ने क्वेस्ट देखियो।
ऊ 8 वर्षको उमेरमा, डेनियल पोडन्सका आमा बुबाले उनलाई बेलेनेन्स एकेडेमीमा भर्ना गरिसकेका थिए, जुन सबैभन्दा पुरानो पोर्तुगा स्पोर्ट क्लब हो। दृढतापूर्वक र पर्याप्त तनावको कारण त्यसले उनलाई हार मान्ने इच्छा महसुस गर्न सक्दछ, उसले निरन्तरता दियो।
प्रारम्भिक क्यारियर जीवन - जब ऊ आफ्नो परिवारको बिरूद्ध मैदान खडा भयो:
२०० 2005 मा, युवा स्पिडस्टरको लागि स्पोर्टि CP सीपीमा भाग लिने अवसर आयो। दुर्भाग्यवस, उनको सम्पूर्ण परिवारले यो विचार मन पराएनन किनकि उनी बेन्फीकामा खेल्ने अवसरको लागि कुर्दै रुचाउँछन्। तपाईं अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ, पोडेंस घर परिवार बेनिफिकाका ठूलो समर्थक थिए।
त्यतिखेर, उनी १० वर्षका मात्र थिए तर उनको परिवारको प्राथमिकताको बिरूद्ध मैदान खडा गर्नुपर्‍यो। लामो कथा छोटो काट्न, पोडन्सले आफ्नो बुबा र आमालाई उनलाई मौका लिन अनुमति दिन राजी गराए। धेरै बहस पछि, सम्पूर्ण परिवारले समर्थन गरे र उनी स्पोर्टि CP सीपी - क्लबमा सामेल भए क्रिस्नोनो रोनाल्डो उनको क्यारियर जीवन शुरू भयो।
आफ्नो क्यारियर पथमा असफलता बाट जोगिन, पोडन्सले आफ्नो जीवनको नौ वर्ष स्पोर्टि football फुटबल एकेडेमीमा आफ्नो सीपको सम्मान गर्दै बिताए। धन्यबाद, उनले उल्लेखनीय सुधार गरे जुन उनलाई फेब्रुअरी २०१ in मा स्पोर्टि CP सीपी रिजर्भ टोलीको लागि डेब्यू गर्ने सुअवसर प्राप्त भयो।
डेनियल पोडेंस बायोग्राफी - ख्याति कथाको लागि मार्ग:
कुनै टाढा समयमा, युवा पोर्तुगाली खेलाडी आफ्नो क्लबको पहिलो टीममा सामेल भए र आफ्ना फ्यानहरूलाई प्रभावित गर्न थाले। स्पोर्टि CP सीपीसँग लगभग दुई सत्रहरू खेल्दा पोडेंसलाई सेप्टेम्बर २०१ More मा मोरेरेन्सेमा एक -तु लामो loanणमा पठाइएको थियो। चाखलाग्दो कुरा, फुटबलको भगवान उसलाई क्लब २०१ the–१– Taca da Liga जित्न सहयोग पुर्‍यायो।
दयालु सम्झना र बेन्फीका आक्रमण कहानी:
प्रिमिरा लीगामा प्रशंसक विger्गरले कत्ति राम्रो प्रदर्शन गरिरहेको देख्यो, खेलकुद प्रबन्धक (जोर्गे जिजस) ले उनलाई टीममा बोलाए। उनी फर्केपछि पोडन्स र उनका साथी टोलीले ज्यान जोखिममा परेका थिए किनभने उनका केही समर्थकहरूले उनीहरूलाई २०१ 2018 मा हिंस्रक आक्रमण गरे।
अगाडि बढ्ने निर्णय:
बलात्कारको एक महिना पछि पोडन्सले निष्कर्षमा पुगे कि उनको क्लब उनीहरुका लागि सुरक्षित छैन। तसर्थ, उनले स्पोर्टि CP सीपीसँगको आफ्नो सम्झौता समाप्त गरे र आफ्ना आमाबाबुको अर्को कार्यवाहीको लागि सल्लाह लिए।
"मेरो लागि, फुटबल जीवनको एक तरीका हो। साथै, यो मेरो भावनात्मक सन्तुलनको लागि एक सेट अप हो। भर्खरका घटनाहरूसँग, मैले खेलनु पर्ने आवश्यक युहनी फेला पार्न असफल भएँ।
स्पोर्टि meले मलाई सिकाएको सबै कुराको बावजुद, उनीहरूले मलाई हिंसा र धम्कीको वातावरणसँग व्यवहार गर्न सिकाएनन्, जहाँ म आफ्नो सुरक्षा र आफ्नो परिवारको लागि डराउँछु। ”
डेनियल पोडेंस सफलता कहानी:
धन्यबाद, पोडन्सले ओलिम्पियाकोस एफसीसँग पछाडिको करारमा हस्ताक्षर गरे जुन एक महिना पछि उसको अघिल्लो क्लब छोडेको थियो। यद्यपि उसको नयाँ क्लबले स्पोर्टि CP सीपीसँग legal मिलियन अमेरिकी डलरमा हस्ताक्षर गर्न सहमत हुनु अघि केही कानुनी कारबाही गर्नुपर्‍यो।
उनको पोडनेस सफलताको कथाको पहिलो यसरी सुरु हुन्छ। पहिलो, उनले आफ्नो परिवारलाई गर्व बनाए किनभने उनले बदल्दै पोर्तुगालको लागि डेब्यू गरे योओ फेलिक्स 753औं मिनेटमा २०२० मा स्विडेनको बिरूद्ध -0-० को जीतमा। ठूलो पछाडि परेको पछि, प्रीमियर लिगमा सारियो।
जनवरी 2020 मा, वोल्भरहेम्प्टन वान्डरर्सले डेनियल पोडेंसमा हस्ताक्षर गरे .16.9 १.XNUMX. million मिलियन को राशिको साढे चार वर्षको करारको लागि। चाखलाग्दो कुरा, स्काई स्पोर्ट्स उनको नाम 'प्लेयर अफ द मैच' आफ्नो पहिलो प्रीमियर लीग उपस्थिति मा। यो अब भनिएको छ कि उसको प्रेम जीवन र बाँकीमा बढ्नु छ, हामी भन्छौ उनको क्यारियर कहानी मा, अब इतिहास हो।
डेनियल पोडेंस प्रेमिका / पत्नी को हो?
को पाइलामा पछ्याउँदै रुबेन नेभज, प्रशस्त विger्गर चाँडै डेटि started सुरु भयो। ड्यानी र उनकी प्रेमिका, कायरा बिस्कोवस्की दुवैले आफ्नो सम्बन्ध धेरै कलिलो उमेरमा शुरू गरेका थिए - २०१० पछि। अविवाहित भए पनि दुबै प्रेमीहरूले दम्पती जस्ता काम गरेका छन्।
यो बायो लेख्ने समयमा, पोडन्सले आफ्नो लामो समयको प्रेमिका, कायरालाई संलग्न गरेको छ। यो अन्तको कुरा हो यो भन्दा पहिले कि उसले अन्ततः गल्लीमा उसको हिंड्ने र उनीसँगै बाँकी जीवन बिताउने जीवन परिवर्तन गर्ने शपथ लिन्छ।
डेनियल पोडेंस बच्चाहरू:
चाखलाग्दो कुरा के छ भने, उसकी श्रीमतीसँगको उनको सम्बन्धले उनको प्यारी छोरीको जन्मलाई जन्म दियो। धेरै जसो पोडेंसले आफ्नो बच्चालाई सम्बोधन गर्दछ फ्याटी जब उनी सोशल मीडियामा उनको तस्विर पोष्ट गर्छन्।
डेनियल पोडेंस व्यक्तिगत जीवन:
निस्सन्देह, Speedter आफ्नो तल देखि पृथ्वी प्रकृति को लागी परिचित छ। हुनसक्छ तपाईं भन्न सक्नुहुनेछ कि उहाँसँग अन्तर्मुखी व्यक्तित्व छ। यहाँ प्रमाण छ - पोडेंसले पिचबाट केही शान्त क्षणहरूको मजा लिन आफैलाई प्रतिबन्ध गर्छ। कहिलेकाँही, उहाँ संगीत सुन्नुहुन्छ जब उहाँ एकान्त ठाउँमा बस्नुहुन्छ, र त्यहाँ हाम्रो आफ्नै पोडन्सले जीवनको अर्थको बारेमा सोच्दछ।
पहिले नै भनिएझैं ऊ ओइरासमा हुर्कियो जहाँ मानिसहरू निरन्तर समुद्र किनारमा जान्छन्। त्यसो हो भने, उनी तटवर्ती भ्रमण गर्ने बानी विकास गर्दछन्। मनपर्‍यो आंद्रे सिल्वा, पोडन्स एक पानी प्रेमी हो जसले आफ्नो खाली समयको केही पोखरी र समुद्री किनारमा खर्च गर्दछन्।
डेनियल पोडेंस जीवन शैली तथ्यहरू:
कुनै श doubts्का छैन, वोल्भरहेम्प्टनमा उनको हस्तान्तरण उनको नेट वर्थ बढाइएको अनुमानित राशि २.2.6 मिलियन डलर (२०२० तथ्या to्क) मा छ। साथै, यो लाइफ स्टोरी लेख्ने क्रममा उनको सम्झौता सम्झौतामा उसको वार्षिक तलब १.2020 मिलियन डलर रहेको छ।
उसको उच्च वित्तीय कार्यवाहीलाई धन्यवाद, पोडन्ससँग ठूलो बाँच्ने अधिकार छ। मनपर्‍यो Diogo Jota, उहाँ सँगी कुकुर प्रेमी हुनुहुन्छ जो कम विलासी जीवनशैली बिताउँछन्। पोडन्सको मिनी कूपरले तल उसको व्यक्तिको बारेमा धेरै कुरा बताउँछ।
डेनियल पोडेंस पारिवारिक जीवन तथ्यहरू:
एकता को अन्तिम भावना एक प्रेरणा शक्ति हो कि सफलता को लागी आफ्नो उत्कट ईन्जिनियर गरीएको छ। सत्य भन्न सकिन्छ, पोडन्स आफ्नो घर एकताबद्ध गर्न बढी चिन्तित छ। यो साथीहरू, आमा बुबा वा आफन्त हो, उसले सबैलाई आफ्नो परिवारको रूपमा लिन्छ। अब हामी तिमीलाई उसको परिवारको बारे उसको बुबासँग शुरू गरौं।
डेनियल पोडेंस फादरको बारेमा:
आफ्नो जीवन कहानी भर मा, प्रशंसक विger्गरले आफ्नो बुवाबाट धेरै समर्थन प्राप्त गरेको छ। पर्याप्त हास्यास्पद, श्री क्विन्टिनो पोडन्ससँग स्पोर्टि CP सीपीमा आफुले आफ्नो छोराको लागि जयजयकार देख्नु भन्दा अर्को विकल्प थिएन। यो परिवारको पुरानो मापदण्डहरूको बिरूद्ध जान्छ किनकि तिनीहरू सबै आफ्नो प्रतिद्वन्द्वी क्लब - बेनिफिकाका डाइ-हार्ड फ्यान हुन्।
डेनियल पोडेंस आमाको बारेमा:
एउटा कुरा हामीलाई थाहा छ कि ड्यानी आफ्नो परिवारको कुनै पनि सदस्य भन्दा उनको आमाको नजिक छ। यहाँ प्रमाण छ। धेरै अवसरहरूमा, डेनियल पोडेंसले आफ्नो राम्रो आमाको तस्वीर सोशल मीडियामा पोस्ट गरेका छन्। कुनै श doubts्का छैन, उनी सँधै उसलाई साइड-लाइनबाट हेर्दैछिन्।
डेनियल पोडेंस भाई बहनहरूको बारेमा:
उसको ख्याति बढेको पछिबाट, प्रतिभाशाली खेलाडीले कतै भाई वा बहिनीको बारेमा कुरा गर्यो। यद्यपि उनीहरूको बारेमा एउटा संकेत भेटियो। ड्यानी लगातार बच्चाहरूको सेट विशेष केहि तस्वीरहरू पोस्ट गर्छन् जुन सम्भवतः उसको भतिजा र भतिजा हुन सक्छ। तसर्थ, उहाँसँग केही ठूला भाई - बहिनी (हरू) हुन सक्छ।
डेनियल पोडेंस सम्बन्धका बारे:
बेनिफिका प्रशंसक भए पनि, उनका हजुरबुबा, अल्सिनो पोडेंसले व्याख्या गरे कि उनी तिनीहरूको प्रतिद्वन्द्वी क्लब - स्पोर्टि CP सीपीमा पोडेंस प्रदर्शनमा गर्व गर्दछन्। सत्य भन्न सकिन्छ, पोडन्स पूरा काका र काकीहरू उहाँ सामेल हुनुभन्दा अघि निरन्तर उहाँको प्रशंसा गाउँदै छन् नुनो एस्पिरिटो सान्तोको वोल्भरहेम्प्टन भटकियो।
डेनियल पोडन्स अनटाल्ड तथ्यहरू:
तपाईंलाई उसको बायोको पूर्ण ज्ञान प्राप्त गर्न मद्दतको लागि, यहाँ केहि पेचीig्गी सत्यहरू छन् जसले तपाईंलाई उसलाई अझ राम्ररी बुझ्न मद्दत गर्दछ।
वोल्वरहेम्प्टन वान्डरर्सको उनको कदम पछि, पोडेंसले वार्षिक रूपमा लाखौं कमाई गर्दै छ। तलको तालिकाले उसको तलबको एक विस्तृत ब्रेकडाउन दिन्छ।
प्रति महिना £ 108,333
प्रति हप्ता £ 24,962
प्रति दिन £ 3,566
हामीले रणनीतिक हिसाबले उसको २०२० आयको विश्लेषणलाई घडीको टिकटमा राखेका छौं। तपाईं यहाँ आउनुभएपछि तपाईंले आफैंलाई हेर्नुहोस्।
जब देखि तपाइँ हेर्न शुरू गर्नुभयो डानियल पोडन्सको बायो, यो उसले कमाएको हो।
तथ्य # १: रुचि:
फुटबल खेल्नु र वाटरबॉडी भ्रमण गर्नु बाहेक, पोर्तुगालीले लन टेनिसमा चासो लिएको छ। जस्तै फ्रान्सिस्को ट्रिन्को, ऊ आफ्नो इन्स्टाग्राम पृष्ठ मार्फत टेनिस खेल्ने सीपहरू प्रशंसकहरूलाई प्रदर्शन गर्ने प्रत्येक विशेष मेमोरी बचत गर्न मन पराउँदछ।
उनको फुटबल प्रोफाइल को २०२० विश्लेषणले किन उनीहरु बीचमा स्थानान्तरित गरेको छ स्क्वाका फास्टेस्ट प्रिमियर लिग खेलाडीहरू। वास्तवमा भन्ने हो भने, फिफा प्रेमीहरूले पोडन्सलाई विश्वास गर्न नसकिने तेज गति भएको छ भनेर प्रमाणित गर्नेछन् जसले उनको उपनाम कमाउँदछन् "स्पिडस्टर"। ऊसँग एक राम्रो संख्यामा फुटबल गुणहरू पनि छन्, जस्तो कि उनी सोफिफा तथ्या .्कमा देखाइएको छ।
डेनियल पोडन्सको जीवनीको माध्यमबाट यात्राले तथ्यको बारेमा बताउँदछ कि ऊ त्यस्तो व्यक्ति हो जसलाई उसले आफ्नो बाल्यकालदेखि नै जीवनमा के चाहान्छ भन्ने कुरा जान्दछ। यो दिमागमा, केहि पनि आफ्नो चमक रोकेको छैन। कुनै श doubt्का बिना, ब्वाँस प्रबन्धक नुनो एस्पिरिटो सान्तो आक्रमणकारी साइनि signहरूको माग गर्दछन् डेनियल पोडन्सको आगमनको साथ जायज छ।
सबै ईमानदारी मा, हामी आफ्नो बुबा, आमा र हजुरबा हजुरआमाले देखाएको उत्कृष्ट प्यारेन्टिंग उदाहरण स्वीकार गर्न असफल गर्न सक्दैनौं। नबिर्सनुहोस्, तिनीहरूको खुशी बेन्फीकालाई हर्षित पार्दा पनि, उनको परिवारले स्पोर्टि CP सीपीलाई समर्थन गरेर ती सबै टाढा फाल्यो। उनीहरूले त्यसो गरे - सबै आफ्नो छोरालाई दिने अधिकतम समर्थन दिने नाममा।
हाम्रो अन्तिम नोटमा, हामी भन्छौ - डानियल पोडेंस बायो पढ्नका लागि धन्यबाद। कृपया हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस् यदि तपाईं केहि पनि ठीक लाग्दैन भने। अन्यथा, हामीसँग डिमिनिटि Win वि Win्गरमा आफ्ना विचारहरू साझा गर्नुहोस्।
पुरा नाम: डानियल कास्टेलो पोडेंस
निक नाम: Speedter
जन्म मिति: 21st अक्टोबर 1995
जन्मस्थान: ओइरास, पोर्चुगल
पिता: क्विन्टिनो पोडेंस
आमा: मारिया डो सेउ कास्टेलो
वार्षिक वेतन: £ 1.3 लाख
नेट मूल्य: £ 2.6 लाख
रुचि र रुचि: पौंडी खेल्न र ल्यान टेनिस खेल्दै
उचाइ: १.1.65 मी (f फिट १ इन्च)
परिमार्जित मिति: नोभेम्बर 2, 2020
Marouane Fellaini बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य